Iron Curtain 2.0: Belarus bars citizens from leaving country | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Ihe mkpuchi Iron: 2.0: Belarus gbochiri ụmụ amaala ịhapụ mba
Citizensmụ amaala Belarus enweghị ihe mgbakwasị maka ịhapụ mba ha, ndị ọrụ gọọmentị kwuru.
Belarus na-egbochi ụmụ amaala ya ịgagharị na mba ọzọ
Belarus na-ekwu na mmachibido iwu ọpụpụ dị mkpa iji kwụsị mgbasa nke ọrịa ọrịa COVID-19
Mgbalị ndị Belarus na-eme iji chịkwaa mgbasa nje a anaghị adị
Ndị ọrụ oke ala Belarus gbalịsiri ike igbochi ụmụ amaala Belarus ịgbalị ịpụ mba ahụ.
Naanị ụmụ amaala Belarus kwere ịhapụ Belarus bụ ndị nwere ihe akaebe nke ibi ebi na-adịgide adịgide na mba ọzọ.
Kọmitii Oke Ala nke Belarus wepụtara nkwupụta n'izu a na-ekwu na ọ "nabatara ọtụtụ arịrịọ n'oge na-adịbeghị anya" site n'aka ndị chọrọ ịhapụ mba ahụ. “Anyị kwupụtara n’ụzọ doro anya na ebe ọ bụ na Disemba 21, 2020, ọpụpụ nwa oge maka ụmụ amaala Belarus.”
Ewezuga, ndị isi ahụ kwuru, a ga-emere naanị ndị nwere ihe akaebe nke ibi ebi na-adịgide adịgide na mba ọzọ. Ndị nwere visa ma ọ bụ ikike obibi nwa oge "enweghị ihe ndabere maka ịhapụ mba ha."
Uzo siri ike di na oke oke, ndi isi na-ekwu, di nkpa iji gbochie mgbasa nke oria COVID-19. Agbanyeghị, ha na-agba mbọ na mbọ niile Belarus na-agba iji gbochie mgbasa ọrịa a. Achọghị ụmụ amaala si mba ofesi na-anwale ule coronavirus, mba a anaghị agakwa ewebata mkpọchi mba.
Na mbido ọrịa a, onye ọchịchị aka ike Belarus Lukashenko kwupụtara na ị drinkingụ vodka na ịga sawụna ga-abụ ụzọ kachasị mma iji gbochie COVID-19. O kwukwara na igwu egwuregwu a haziri ahazi bụ ihe ngwọta dị mma, na "ọ ka mma ịnwụ na-eguzo n'ụkwụ gị karịa ibi na ikpere gị."
Onye ọchịchị aka ike nke Belarus na ndị uwe ojii nzuzo ya butere oke nkatọ zuru ụwa ọnụ n'izu gara aga mgbe a Ryanair E jidere ụgbọ elu si Gris gaa Lithuania ma manye ka ọ daa na Minsk na May 23. Ozugbo ha ruru na tarmac, ndị ọrụ nchekwa obodo jidere onye editọ nke ọwa ozi Telegram amachibidoro, Roman Protasevich, na enyi ya nwanyị, bụ onye Russia Sofia Sapega, ndị so na ndị njem ụgbọ elu ahụ.
European Union, nke kọwarala ịtọrọ ụgbọ elu Ryanair dị ka "ndọtị obodo," na-akwadozi ngwugwu mmachi megide ụgbọelu mba Belarus, yana ihe ruru ndị ọrụ ụgbọelu iri na abụọ. A machibidoro Belavia, onye na-ebu ọkọlọtọ mba ahụ n'ụzọ ụgbọ elu nke mba ndị otu EU dịka nke izu gara aga, ọtụtụ ụgbọ elu ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ arewa na-agbagha ụzọ ndị gafere Belarus.
Dị ka otu onye nnọchi anya EU na-akpọghị aha si kwuo, “mba nile nke EU kwenyere n'ụzọ a.” Onye ozi nke abụọ gbakwụnyere na mmachi ọhụrụ a ga-abụ "ihe ngosi doro anya maka Lukashenko na omume ya dị egwu ma bụrụ nke a na-agaghị anabata."